Ellicott dia manambara fifanarahana fanamboarana kirakirano telo
Ellicott dia nanambara ny fifanarahana amin'ny Dredger Custom telo
Ellicott Dredges, LLC dia nanambara fa nahazo fifanarahana lehibe ho an'ny fanodinana natao ho azy ireo manokana izy.
Tamin'ny voalohany dia nisy orinasa simika iraisam-pirenena lehibe nisafidy an'i Ellicott hanamboatra dredge bucketwheel elektrika manokana hitrandrahana sira amin'ny fampiharana fangadiana faran'izay mafy. Ilay dredge vaovao, izay hampiakatra ny vokatra avoakan'ny toeram-pitrandrahana isaky ny ora fiasana ary hampihena ny vidiny isaky ny taonina ny sira vokariny, dia ho tonga dredge voalohany amin'ny harena ankibon'ny tany. Ny sira dia hatao sakafo ho an'ny vokatra simika isan-karazany toy ny chlorine based PVC.
Ny endri-javatra vaovao ao amin'ny dredge B2190E dia misy:
Rafitra hydraulic vaovao, natao an-trano, mikendry ny hampihenana ny fanjifana herinaratra eo ho eo amin'ny 10% vs rafitra misy
Ny herinaratra noho ny fanaraha-maso hidradrano
Onjam-peo PLC mahavita manangona data ary manome fidirana lavitra amin'ny fanaraha-maso sy rafitra
Tamin'ny tranga faharoa, i Barnstable County, Massachusetts, Etazonia dia nanome fifanarahana tamin'i Ellicott taorinan'ny tolom-bahoaka. Ny dredge vaovao dia hampiasaina mba hitazonana ireo seranan-tsambo kely amin'ny alàlan'ny fampiasana indray ny fasika amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny morontsiraka. Ny dredge dia maneho dingana lehibe avy amin'ny endrika kely kokoa Ellicott dredge, maodely Series 670 Dragon® nantsoina hoe "CODFISH," izay i Barnstable dia niasa tamim-pahatokisana sy nahafa-po nandritra ny 20 taona.
Ellicott Series 670 Dragon® dredge fananan'i Barnstable County
Ny endri-javatra vaovao ao amin'ny dredge Barnstable County Series 850-S dia ahitana:
Rafi-pitondran-tena vaovao, natao an-trano, mikendry ny hampihenana ny herinaratra sy ny fanjifana solika manodidina ny 10%
Ny vokatra IQAN sy REDLION ampiasaina amin'ny fampandrosoana an-trano amin'ny fanaraha-maso rehetra fanaraha-maso sy fandaharana fahitana
Ny fanaraha-maso an'i Fingertip miaraka amin'i Joysticks dia napetaka ao amin'ny sezan'ny fifehezan'ny operator
Farany, nanambara i Ellicott fa orinasa orinasa eoropeana lehibe iray no nanome azy fifanarahana hanomezana dredge tongolo-bolongana kely ho an'ny fambolena fambolena.
Ireo fanafahana telo rehetra dia ho vita alohan'ny faran'ny 2017.
Raha mila fanazavana fanampiny, dia mifandraisa:
Robin Manning, Mpandrindra varotra